Xukuumadda Soomaaliya oo meesha ka saartay in Isla xisaabtan iyo xil ka qaadis aan lagu sugi karin amniga – Somali Top News
Xukuumadda Soomaaliya oo meesha ka saartay in Isla xisaabtan iyo xil ka qaadis aan lagu sugi karin amniga
March 29, 2019 Somali Top News	0 Comments
Wasiir Kuxigeenka Wasaarada Warfaafinta Soomalaiya Aadan Isaaq Cali, ayaa ka hadlay qarixii xoogganaa ee shalay ka dhacay Wadada Maka Al-Mukarama, kaasoo ay ku geeriyoodeen dad ka badan 15 qof oo Shacab ahaa.
Wasiir Aadan Isaaq, ayaa sheegay iney ka xunyihiin weerarada Shabaab ay ka geysanayaan Caasimada, isagoo taa bedelkeedna sheegay ineysan yareyn shaqada ay Muqdisho ka hayaan laamaha amaanka, wuxuuna sheegay iney mudanyihiin in la garab istaago.
Waxa uu sheegay iney bulshada arkaan oo kaliya waxa dhacaya, balse ay jiraan qaraxyo waaweyn oo ay fashiliyaan Ciidamada amaanka, kahor inta aan la qarxin, walow uusan soo bandhigin qaraxyada uu sheegay in la qabtay.
Dhinaca kalena mar wax laga weydiiyay sababta la iskala xisabatami la’yahay waxa socda, waxa uu hadalkiisa ku soo koobay ineysan wax micno ah amniga ku soo kordhineynin in xil ka qaadis lagu sameeyo ama isbedel uu ka dhoco mas’uuliyiinta amniga ku shaqada leh.
Si kastaba, Qarax shalay duhurnimadii ka dhacay inta u dhexeyso Kontoroolka laga ilalaiyo madaxtooyada ee Seydka iyo Isgoyska Debka waxaa ku naf waayay dad ku dhow 20 ruux, halka ay dhaawacmeen Sodomeeyo kale, mana jirto wali cid dowladda ay kala xisaabtantay waxa socda oo Warbaahinta la ogeysiiyay.
← Madaxweyne Farmaajo oo loogu baaqay in Ummadda uu u soo celiyo xilka iyo amaanada loo dhiibtay
Somalia Not Ready for Massive Refugee Return, UN Warns →
Wararkii ugu dambeeyay khilaaf u dhaxeeya Ahlu-Sunna iyo Dowladda Federalka
Ahlu-Sunna oo magaalada Dhuusomareeb ka hor istaagtay iney soo galaan ciidan katirsan AMISOM